Bearish amin'ny bilaogy | Martech Zone
Bearish amin'ny bilaogy
Alarobia, Jolay 5, 2006 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
News.com - Bearish amin'ny bilaogy
Fanamarihana mahaliana vitsivitsy momba ny fipoahan'ny bilaogy. Toy ny 'bubble' rehetra, ny olona dia efa miresaka momba ilay 'fipoahana'. Ny ahy manokana dia i Nick Denton tsy mahazo 'bearish amin'ny bilaogy', manjary bearish amin'ny bilaogy ratsy izy ho loharanom-bola. Ireo bilaogy dia hitohy hivoatra rehefa mandeha ny fotoana ary hiaraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny tranonkala. Na izany aza, toy ny amin'ny tranonkala rehetra, ny atiny dia tsy maintsy manjaka. Raha tsy manoratra tsara noho ny tovolahy manaraka ianao dia ho leo ny olona ary hiala.
Ho an'ireo orinasa toa an'Andriamatoa Denton izay mampiasa bilaogy ho loharanom-bola dia midika izany fa mila mpamono olona ny fidirana bilaogy rehetra. Misy loza mety hitranga amin'ny fidiram-bola amin'ny filokana ho an'ny atiny - indrindra rehefa misy pejy an'arivony tapitrisa ao.
Tsy mitoraka bilaogy momba ilay vola aho (tsy hihinana aho raha mihinana). Fa kosa, bilaogy aho hifandraisana amin'ny namana, fianakaviana, ary ireo matihanina amin'ny indostria hafa. Ity dia toerana hizarako ny eritreritro sy hiresahana ny hevitry ny olon-kafa. Manome ahy fampahafantarana sy fangatahana tamberina avy amin'ireo izay hajaiko izany.
Tags: bearish amin'ny bilaogybilaogyfitorahana bilaogyForbesMySpacenick dentonny bubble myspace
Olona fahefatra? Olona fahadimy? Olona gramatika sy marketing
Maninona no tsy mahomby ny indostrian'ny sarimihetsika, ny tohiny